Gabar Caruusad Ah Oo Dishay Sodohdeed (SABAB) | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Gabar Caruusad Ah Oo Dishay Sodohdeed (SABAB)
Bulsha:- Wararka ka imaanaya India ayaa sheegaya in gabar caruusad ay ka taqalustay sodohdeed kadib markii la sheegay in sodohdu ay isticmaashay Taleefoonka gabadha uu wiilkeedu qabo iyadoo aan weydiisan.
Booliska deeganka Bhiwani ayaa soo xiray gabar 20 jir ah oo lagu magacaabo Surekha,taas oo asbuucan dishay Sodoheed oo iyada lagu magaacbi jiray Phoolwati.
Booliska wax baara ayaa xaqiijiyay in gabadhaan ay disshay ninka qaba hooyadii taa oo teleeoonkeeda gacanta ka wacday rag ay gabadhaan saaxib la ahaan jirtay si ay wax uga weydiso nuuca dhaqankeedii hore.
Afayeen booliska u hadlay waxaa uu sheegay in gabadhaan ay go,aansatay in sodohdeed ay disho kadib markii ay aamintay iney sir badan ka heshay asxaabteeda.
Boolisku waxaa y sheegeen in haweeneydaan ay dilka u adeegsatay feero bir ah xili ninkeedu uu ka maqnaa guriga waxaa sido kale dilka la aaminsan yahay iney ka caawiyeen dad ay asxaab yihiin.
Qaar dariska ka mid ah ayaa sheegay in labo nin oo indhaha soo xirtay ay guriga gudaha u galeen dilka ka hor laakiin ragaas wali lama aqoonsan.